တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကျမ သိသော ကိုယ်ကျင့်တရား
Posted by မေဓာဝီ at 1:45 PM
Now I remember I wrote about Morality ..hee hee. But I didn't mention details. Thanks for explaining.
hee hee..I am just pointing out others's morality.
Now I am asking myself.lol
Thanks , Connection at Home.
I can write comment fortunately.
by the way, I love your mommy & daddy. They look so lovely.
My mommy and daddy are fat although I am thin.
hee hee..I eat more than they do.
7/31/2007 4:24 PM
Khine Khine said...
I'm regular visitor of your blog.But this is the first time I try to postacomment.I like and love most of your blogs.Your blog make me relax when I feel stressful.May, you are very lucky that you can stay with your lovely parents togethers. Your parent and my parent are about the same age.For me, I'm very far from my parent and can meet my parent onceayear. Somehow, I wish all the best for your family.
8/01/2007 5:31 AM
မေရေ..အမက မေ့လိုပဲ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ ကိုယ်ကျင့်ရမယ့် တရားလို့ လက်ခံတာမို့ အဲဒီခေါင်းစဉ်ကို tag တောင် မလုပ်တော့ပါဘူး။
ခု မေအသေးစိတ်ပြောောတ့ သိပ်ကောင်းတာပဲ။ အမကကျတော့ ပျင်းတယ်လေ..ဟဲဟဲ။
အင်းး ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမယ့်တရားဆိုပေမယ့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာဘာလဲ သိအောင်..ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေတော့ ပြောရမှာပေါ့မေရယ်။ ပြောရရင်တော့ ဘုရားဟောတွေနဲ့ ညီအောင်တော့ နေနိုင ကျင့်နိုင်ခဲသားပါ။ ပြီးတော့ ဘသူမှလည်း ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင်မဟုတ်နိုငပါဘူး။ ခုခေတ်ဆို ဘုန်းကြီးရဟန်းတွေထဲမှာတောင် အပြစ်မစင်ကြသေးတာ။ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဝန်းကျင်လေးနဲ့ ပတ်သက်သလောက်မှာတော့ ရသလောက်ကျင့်ကြံရမယ်ထင်တာပဲ။ အမကတော့ မလျှော့သေးဘူးကွယ်.. အထူးသဖြင့် လူထုရှေ့ဆောင်တွေကတော့ မဖြစ်မနေကျင့်ကြံသင့်တယ်ဆိုတာကိုလေ။
ပြီးတော့လေ မကောင်းသူကို အပြစ်တော့ တင်ရမယ် ညီမရဲ့.. မဟုတ်ရင် သူတို့ခမျာ ဒါကို အပြစ်လို့ မသိဘူးဖြစ်နေမှာလေ။ အမတော့ အဲလို ထင်တာပဲ။
8/01/2007 7:17 AM
ဒီ post လေးကိုတော့ အရမ်းနှစ်သက်မိပါတယ်။ တကယ်ပဲ မေတ္တာဓာတ်တွေထုံလွှမ်းနေပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ လူမျိုးတိုင်း၊ ဘာသာတိုင်းရဲ့ အနှစ်ဖြစ်တယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်က လေးနက်သလောက် ကျယ်ပြန့်တော့ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ ကိုယ်လျှောက်လှမ်းကြတာပေါ့။ ဒီလင်္ကာလေးက ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ သက်ဆိုင်မယ်ထင်လို့ တင်ပါရစေ မမေဓာဝီ ခင်ဗျား။ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ရဲ့ လင်္ကာလေးပါ။
ပြောပြုတွေးလျှင်၊ သတိယှဉ်၊ ဆင်ခြင်ဥာဏ်ရှေ့သွား။
စိတ်ထားဖြောင့်မှန်၊ ခွင့်လွှတ်ရန်၊ သည်းခံမေတ္တာထား။
လုံလနှင့်ဇွဲ၊ မလျှော့ပဲ၊ အမြဲတင်းတင်းထား။
အရာရာတွင်၊ အသုံးဝင်၊ အောင်မြင်ကြောင်းတရား။
ဆရာလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တခုလောက်ပြောချင်လို့ပါ။ မမရဲ့
ဒုစရိုက် ၁၀ပါးကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုစရိုက် ၁၀ပါးက ဒုစရိုက်၁၀ပါးရဲ့ပြောင်းပြန်ကို ခေါ်တာလို့ထင်ပါတယ်။ မမရေးထားတဲ့ ၁၀ပါးက ပုညကိရိယ၀တ္ထု ၁၀ပါး လို့ ထင်ပါတယ်။ ကောင်းကျိုးတို့၏ တည်ရာဖြစ်သော ပြုထိုက်သည့်ကောင်းမှုများ လို့ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်က အနက်ဖွင့်ပါတယ်။ သုစရိုက်၁၀ပါးနဲ့မတူပါဘူးထင်လို့ပါ။
ဟုတ်တယ် ဒေါ်လေးဟနရေ … ။ မမေတို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မကြည့်ဘဲ သူများကိုပဲ ကြည့်နေမိတာ များတာကို။ အဲဒါက မထူးဆန်းပါဘူး။ အများအားဖြင့် ဒီလိုပါပဲ။
ဟနပြောတာ မမေရဲ့ အမေနဲ့ အဖေကို ပြောပြလိုက်တော့ … ပြုံးနေကြတယ်။ ကျေးဇူးနော် .. ဟန။
မခိုင်ခိုင်ရဲ့ ကွန်မန့်အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘလော့ကို အမြဲလာလည်ဖတ်ရှုတယ်ဆိုလို့လည်း ၀မ်းသာမိပါတယ်။ နောက်လည်း ဖတ်ပါဦးနော်။
ဒါပေမဲ့ ဒီစာမှာ ရေးခဲ့တဲ့ အချက်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတခုတည်း ကျင့်ကြံရမယ့်အချက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘုရားဟောတွေနဲ့ ညီအောင်နေတယ် ဆိုတာထက် လူသားဆန်စွာ လူပီသစွာနေထိုင်လိုသူတိုင်း ဒီအချက်တွေနဲ့ ညီအောင် နေသင့်တာပါ။ နေနိုင်ခဲ ကျင့်နိုင်ခဲတာတော့ အမှန်ပဲ အမရေ .. ။ ဒါကြောင့်လည်း ရာဇ၀တ်မှုတွေ ရှိလာတယ်၊ ရာဇ၀တ်သားတွေကို အပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေ ပေါ်လာတယ်၊ ထောင်တွေ အချုပ်တွေ ဆိုတာလည်း ပေါ်ပေါက်လာတာ မဟုတ်လား။
ဘုန်းကြီး ရဟန်းတွေလည်း အပြစ်မကင်းကြဘူးဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသေးစား အပြစ်တွေကို အာပတ်ဖြေရင် ရပါတယ်။ ပါရာဇိကဏ် ကျမှသာ အာပတ်ဖြေလို့ မရတာပါ။ ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတွေ အနည်းအပါး အပြစ်ကျူးလွန်မိတာကို ဒကာတွေ ဒကာမတွေက လိုက်အပြစ်တင်လို့မရဘူး။ ဒီလို အပြစ်တင်ရင် သူတို့ အကုသိုလ်က ကိုယ့်အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ လူတွေ (သူတပါး) ကျူးလွန်တဲ့ အပြစ်တွေကို လိုက်ကြည့် အပြစ်ပြောနေတာထက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကောင်းအောင် အရင်ကျင့်ကြံနေထိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ မသိတဲ့လူကို သိအောင်လမ်းညွှန်ပြတာတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြစ်တင်တဲ့ ပုံစံမဟုတ်ဘဲ စေတနာနဲ့ ညွှန်ပြတတ်ရင် ပြောသူ နာသူ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိတာပေါ့။
ညီမစာရဲ့ ဆိုလိုရင်းက လူတိုင်း ကိုယ်တိုင်ကောင်းအောင်နေထိုင် ကျင့်ကြံ နိုင်ဖို့ပါ။ ဒီလိုသာဆိုရင် ဘယ်သူ့ ဘယ်သူမှ အပြစ်ပြောဖို့လည်း မလိုဘူး။ အပြစ်တင်ဖို့ အပြစ်မြင်ဖို့လို့ လိုတော့မယ် မထင်ပါဘူး အမရေ … ။
Wai >> ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ရဲ့ လင်္ကာလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Chocolaier ပြောတာမှန်ပါတယ်။ မမေရေးထားတာ ပထမ (၁၀) ချက်က ဒုစရိုက် (၁၀) ပါးပါ။ သုစရိုက် (၁၀) ပါးကတော့ ဒုစရိုက် (၁၀) ပါးရဲ့ အပြန်အလှန်မို့ မရေးတော့ဘဲ ပုညကြိယ၀တ္ထု (၁၀)ပါး (တနည်းအားဖြင့်) ကုသိုလ် ဆယ်မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
8/02/2007 5:45 AM